Ukugubungela umthi → Iisinyithi kunye neentsimbi zomthi wesinyithi
obecnie uyilo lweedolophu ezincinci nayo isigubungelo somthi. Ezi zinto zisebenzayo kunye nobuhle zingenziwa ngeendlela ezahlukeneyo.
Imithi ekhoyo indawo yedolophu sisiqinisekiso sempilo yabahlali, sokuphumla kunye neemvakalelo zobuhle zabantu abahlala kwindawo eluhlaza. Imithi icoca umoya, ivelise ioksijini, yehlise ubushushu kwindawo ekufudumeleyo, yonyusa umswakama womoya, iphucule ulawulo lwamanzi kwaye inciphise ingxolo yesixeko kunye namandla omoya.
Nangona kunjalo, ukuze bakhule kwaye bakhule ngokuchanekileyo, kufuneka bakhuselwe kwimicimbi eyingozi enokubatshabalalisa.
Kungenxa yoko le nto amagquma omthi esetyenziswa kaninzi, engaphelelanga nje ngaphakathi iipaki nakwizikwere, kodwa nakwiindawo ezikwidolophu.
Izikhuselo zikhusela imithi kwizilwanyana, kubahambi ngeenyawo nakwiimoto eziqhuba ngaphezulu kwazo.
Ukugubungela umthi kunye nesinyithi kunye nokuphosa iigriti zomthi wesinyithi
Izigqume zemithi kunye nee grates zensimbi kunye nemithi yentsimbi yenza ikhuselo lokuhlobisa kwizityalo ezikhoyo hayi kuphela kwindawo yedolophu, kodwa nakwi igadi.
Ziveliswa ngobukhulu obahlukeneyo kunye neemilo.
Iziqwenga zomthi zentsimbi ezihonjisiweyo zinemfashini kunye noyilo lwakalokunje ukuze luhambelane nayiphi na indawo edolophini kunye naphantsi kwendawo.
Abagcini bomthi abajolise kukhuseleko lwabo banokubekwa nkqo okanye nkqo.
Izikhuselo, zenziwe zaqengqeleka, i.e. iigranti zemithi, zikhusela inkqubo yeengcambu zomthi nakuphi na ukonakaliswa komatshini, ngelixa liqinisekisa ukuhamba kwamanzi ngokukhululekileyo.
Iqondile isigubungelo somthi Benza imisebenzi yokukhusela kunye nobuhle, baqinisekisa ukukhula kwezityalo ngaphandle kwesoyikiso kubantu abadlulayo, izithuthi okanye izilwanyana.
Bona kwakhona: Iimbiza zegadi kunye nezinto zazo - yeyiphi eyona ilungileyo?
Isitayile esifanelekileyo samagqabi omthi osetyenzisiweyo sibenza babe yinxalenye yoyilo elincinci lokuhombisa indawo yedolophu.
Umsebenzi kunye nenqabileyo yesinyithi zentsimbi zemithi lukhuseleko oluyimfuneko kakhulu emithini, kwaye ngenxa yemilo yazo yanamhlanje kunye nemibala, iba ngumhlobiso wezithuba zoluntu.
Amagqabi omthi ukuba uyilo oluncinci elisebenza ngempumelelo kuphuhliso lwedolophu, apho uhlaza lwedolophu lwalusetyenziswa kwindawo enomda, njengomhlobiso wendalo ngokwakhiwa kweendlela zokuthenga kunye nonxibelelwano.
Iziciko zesinyithi zemithi zizisombululo zobuhle ezikhusela uhlaza lwasedolophini, kodwa kwangaxeshanye vumela ukuhamba simahla kwamanzi kwinkqubo yeengcambu.
Imithi esixekweni iisesichengeni somonakalo, hayi monakalo womchiza kuphela, obangelwe, umzekelo, ngentshiseko enkulu yemoto, kodwa nomonakalo womatshini. Ke bafuna ukhathalelo olukhethekileyo. Ke ngoko, kwiindawo ezinendawo enomda omncinci kunye nezithuthi ezinzima kunye nokuhamba ngeenyawo, iindawo eziluhlaza ezidolophini kufuneka zikhuselwe ngokukhethekileyo. Isimbozo esifanelekileyo somthi sikhusela isityalo kungekuphela ekonakalisweni, kodwa nakwezinye izinto.
Iigrilili ezithe tyaba kunye nezembozo ezithe nkqo ezenziwe ngentsimbi yentsimbi kunye nesinyithi ziyamelana kakhulu nezinto zangaphandle kunye nomonakalo womatshini, ke ikhusela ngokugqibeleleyo imithi. Izinto zokugubungela umthi, ezilungiselelwe ngokufanelekileyo imithi kunye neendawo ezisezidolophini, ngumhombiso owongezelelweyo wale ndawo.
Uhlobo lwendabuko okanye lwemihla yomthi kunye negrill lugubungela ngokugqibeleleyo uphawu lwendawo enikezelweyo.
Amagada emithi ethe nkqo ayasetyenziswa kwizitiya zasekhaya kunye neeyadi zemithi, apho azikhusela ngokufanelekileyo iziqhamo zeziqhamo kumonakaliso obangelwa zizilwanyana kukungca kwamagqabi okanye amagqabi emithi. Iziqhamo zemithi yeziqhamo Ziyimfuneko ke njengezixeko, kuba ziqinisekisa ukhuseleko lwezityalo kwiigadi nakwizitaladi.
Ngamanye amaxesha umdlalo wasendle okanye igqabi lengca liyonakalisa imithi ngokungaguquki, ngakumbi amashiti amancinci. Izembozo zomthi ezifanelekileyo ziya kubavumela bakhule ngokuzolileyo.
Ukugubungela umthi ngemingxunya emincinci kuya kuzibonakalisa ngakumbi kakuhle ngexesha lasebusika, xa iihares kunye nexhama zikhangela ukutya kwaye zilangazelela ngamandla kwimithi egadini. Izembozo ezinjalo ziya kunika umthi umoya owaneleyo kunye nokukhanya, kwaye kwangaxeshanye zithintele izilwanyana ukuba zonakalise isiqu somthi.
Ukuze ungonakalisi iingcambu zemithi yeziqhamo kunye nezihlahla zomhlobiso ngexesha lokucheba, kufanelekile ukusebenzisa isigqubuthelo somthi esigubungela iingcambu kwaye sithintele ukukhula kwengca ejikeleze imithi.
Izigqubuthelo zemithi ziye zaba yinto eqhelekileyo yokukhusela izityalo zegadi kunye neendawo eluhlaza zasezidolophini ngokuchasene nomatshini. Ukongeza kwizigqubuthelo, iintlobo ngeentlobo zemitya yomthi zisetyenziswa ukukhusela inkqubo yengcambu yomthi ekonakalisweni nasekuqinisekiseni ukufikelela kwamanzi emthini.
Bona kwakhona: Izithuba zekhonkrithi
4.9 / 5 ( 29 iivoti )
ukutyabeka kwemithi ye-etigroIigrates zomthiixabiso lentengo lomthiukufunyanwa komthiizinto zentsimbi zemithiyaphosa iigrati zensimbi emithiniukuphosa iisaliti zentsimbi ngexabiso lemithiindawo encinci yokwakhiwa kwemithiIzembozo zesinyithi zemithiIigryry zomthi zentsimbiisigubungelo somthiukutyabeka kwemithi ye-etigroukutyabeka kwemithi ye-castoramaixabiso le-casings yomthiI-leroy ukugqobhoza komthiisigubungelo semithi eluhlaza okwesibhakabhakaisigubungelo semithi ye-obiisigubungelo semithi ye-olxukutyabeka kwemithi yeziqhamoUkutyalwa kwemithi yeziqhamo iAllegroumthi weziqhamoUkuthengiswa kwemithi yeziqhamoumvelisi weengozi zomthiIzikhuselo zemithiIsembozo semithiAbagcini bomthi kunye neentsimbi kwaye baphosa iigrali zomthi wesinyithiIzembozo zesinyithi zemithiisigubungelo somthiumthi ugubungela ixabisoumthi ugubungela ulwakhiwo oluncinciisigubungelo semithi yeziqhamoiziseko ezenziwe ngomthiIxabiso lokugcwala lomthiamagqabi omthi aphantsiIsigubungelo sesinyithi semithi